Intliziyo endihlala nayo, ibhaso lenoveli yasentwasahlobo 2020 | Uncwadi lwangoku
Intliziyo endihlala nayo yinoveli yembali ebhalwe nguSpain uJosé María Pérez, owaziwa ngcono njengePeridis. Yapapashwa ngo-2020 kwaye ibekwe eSpain eyayineengxaki ngo-1936. Zisuka nje, le ncwadi yamkelwa kakuhle ngabafundi nabagxeki. Kwakuloo nyaka wokukhutshwa kwayo, yanikwa ibhaso le-Primavera de Novela.
Umbhali uchaza kwintshayelelo yencwadi ukuba wakhuthazeka yincoko awayenayo kuloliwe nomntu angamaziyo, owayeyinzala kagqirha omdala wabantu baseParedes Rubias. Wamxelela amabali aliqela kwizalamane zakhe, nakwabanye abamelwane. Umgca ngamnye wale ngxelo uxhaswa ngentetho, kunye namabali kunye nabalinganiswa bokwenene baxhaswa ngeengcamango ezithile.
1 Intliziyo endihlala nayo (2020)
1.1 Usapho lweBeato
1.2 Usapho lakwaMiranda
2.1 Ukusebenza njengomzobi
2.2 Eminye imisebenzi yobungcali
2.3 Uhlanga loncwadi
Intliziyo endihlala nayo (2020)
Incwadana yembali isethwe kuluntu lweParedes Rubias, kanye ekuqaleni kweMfazwe Yamakhaya yaseSpain. Incwadi yile ngolungelelwano en izahluko ezimashumi mahlanu ezimfutshane, eyiphi baqala en NgoJuni ka 1936 y phelisa Oktobha ka 1941. Eli bali libandakanya abalinganiswa abohlukeneyo, abadlula kwiinkxwaleko ezahlukeneyo, ngaphaya kwembambano.
Incwadi ibonisa indlela abaphila ngayo iminyaka enzima ngelixa inkqubela yemfazwe iqhubeka kwaye emva koku kufikelela esiphelweni, kodwa ngaphandle kokuphulukana nethemba lokuba yonke into izakuphucuka. Yonke into iyenzeka eSpain eyonzakeleyo, kodwa nabantu abomeleleyo, abaya kulwela ukumhlangula, ngokusekelwe kuthando, usapho kunye nomnqweno wekamva elingcono.
Intliziyo endiphila ngayo: ...
UHonorio Beato ungumhlolo kwaye uhlala neentombi zakhe ezintathu: uCaridad, uEsperanza noFelicidad. Ungugqirha owaziwayo oqhuba ikliniki eCubillas del Monte naphambi kwemfazwe wayekhonza njengentloko yeSpanish Falange. Ngaxeshanye kwaqala ungquzulwano, bona bagqiba kwelokuba babaleke edolophini ukuthintela ukohlwaywa okunokwenzeka.
U-Esperanza ngomnye wabalinganiswa abaphambili ebalini. Ungumntu olwela amalungelo abantu kwezopolitiko kwiCandelo lowasetyhini laseFalange kunye nomntu okhathalayo. Ukongeza ekukhuseleni iinjongo zakhe, uyabanceda abahlobo bakhe beRiphabhlikhi, inkoliso yabo igwetyelwe ukufa. Ngaphandle kwenguquko ethe yanikezelwa bubomi bakhe, ukhetha ukubeka intlalontle yabanye ngaphambi kokucinga ngobomi bakhe.
UArcadio Miranda ngugqirha kwaye wayiriphabliki, umhlolo ononyana ababini, uGabriel noLucas, kunye nentombi egama linguJovita, osebenza njengomfundisi-ntsapho edolophini. Usapho lwakho luya kuchaphazeleka kakhulu kukujongana ngezixhobo, besoyikiswa nditsho zizigulana nabahlobo babo. Bonke baya kususwa kwimisebenzi yabo ukuze bafumane iziphumo zolo hlaselo.
UGabriel ngugqirha omncinci onobugcisa obungenakubonwa kunye noceba weBhunga leSixeko. Kuyakufuneka azimele ngoba ungowakwelinye icala elichasayo, nangona naye eyokugqibela ezivalela. Kwinxalenye yayo, Lucas, ophakathi kwenyani eyoyikekayo yomntakwabo, ibizwa phezulu, imeko ayibona njengenye indlela yokusindisa ubomi bakhe, kuba unelungelo lomsebenzi wobugcisa.
Ibali libandakanya iintsapho ezimbini, leyo kaGqirha Honorio Beato —UbuKrestu Nobundlobongela kunye neRiphabhlikhi uGqirha Arcadio Miranda. Bobabini babesazana kwizifundo zabo kwiziko lezonyango, nangona babehlala benemiqobo eyahlukeneyo yezopolitiko. Bona kunye neentsapho zabo Baphila iintsuku ezonwabileyo ngobusuku obandulela uhambo, ebanjwa minyaka le yosuku lweVergen del Carmen.
Embindini walo mnyhadala, bonke abantu babelana ngezidlo nangokudanisa, ngaphandle kokukhetha ukuba bakweliphi icala lezopolitiko. Kukho apho Emva kweminyaka emininzi U-Esperanza Beato kunye noLucas Miranda badibana, Ndifumanisa ukuba iza kuza nayo ngaphezu kobuhlobo kuphela. Oku Ngaphandle kokucinga ukuba kwiintsuku nje ezimbalwa kuya kuqhambuka imfazwe eyoyikekayo, eya kutshintsha yonke into.
Abachasi bakarhulumente basuka ekubeni ngabavukeli baba phambili kwaye banelizwi. Emva kokuthatha ulawulo, baqala ukutshutshisa amalungu karhulumente ophumayo. La inyani entsha iziswe njengesiphumo sengxwabangxwaba kwezopolitiko nakwezomkhosi, eyatshayela yonke into esendleleni yayo.
Yonke le meko inzima ibangele ukuba amaxabiso avele ebantwini; isibindi, ukuthobeka, ubumbano kunye nobuntu bachuma kakhulu; ngaphaya kwezahlulo zezopolitiko.
UJosé María Pérez -uqambi kunye nombhali owaziwa njengoPeridis- weza emhlabeni ngeCawa, nge-28 kaSeptemba 1941 kumasipala waseCabezón de Liébana (eCantabria). Xa ndandineminyaka emithathu ubudala, Usapho lwakhe lwafudukela ePalencia, ngakumbi kwidolophu yaseAguilar de Campoo, indawo ahlala kuyo de wagqiba amabanga aphakamileyo.
Kwiminyaka kamva, wafudukela eMadrid ukuya kwenza izifundo zakhe eyunivesithi kwaye ngo-1969 waphumelela njengomyili wezakhiwo. Ukhethe lo msebenzi ukhuthazwa ngumdla wakhe kulondolozo, ukhuseleko kunye nokuhlangulwa kwelifa lemveli laseSpain.
Oko waphumelela, usebenze ekwakhiweni ngokutsha kweetempile, iithiyetha, izakhiwo, iinqaba, amathala eencwadi kunye nezindlu zenkcubeko. Kwiminyaka engama-40 I-1977 - 2017 Wayalathisa ePalencia iSanta María la Isiseko sokwenyani seLifa leMveli, eyamvumela ukuba abekho kwiindlela ezininzi zokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ezinje, umzekelo:
UFrancisco de los Cobos Palace e-Úbeda
Iemonki zaseSanta María la Ngokwenene eAguilar de Campoo
USodolophu waseColegio "uVasco de Quiroga" kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid
Eminye imisebenzi yobungcali
IPeridis yaziwa ngokubanzi ngomsebenzi wakhe njengekhathuni ehlekisayo, Umsebenzi owaqala kumashumi asixhenxe. Wenza iikhathuni zakhe zokuqala ngokusekwe kwezopolitiko zelo xesha, awayezipapasha kwiphephancwadi umSiriya I-SP.
Ukususela ngo-1976 Ukuza kuthi ga ngoku, uPérez ipapasha amahlaya kwiphephandaba Ilizwe. Ngalo msebenzi uneziqhamo, umbhali wenze ukudityaniswa okuninzi, kwaye ngenxa yoko, kwapapashwa iincwadi ezi-6 ezinemifanekiso emihle. IPeridis 1.2.3. Iminyaka emi-6 ide itshintshe (1977) kunye Ukuthembana kwaye akukho bond (1996). Uvelise ezimbini iiphoto ikhathuni ye I-TVE.
Ukususela nge-2002 ukuya kwi-2007 thaca uthotho lweTV Izitshixo ze-Romanesque en I-TVE. Olu xwebhu belunamaxesha amathathu apho ukhenketho olunesiqingatha seyure lwezikhumbuzo zembali ezahlukeneyo zanikezelwa. Emva kwalo msebenzi, uPeridis waqhuba ezinye iinkqubo ezimbini kwisiteshi sikamabonwakude esinye, ezinje: Hambisa iintaba y Ukukhanya kunye nemfihlakalo yeedhedral.
Waqala ukupapasha kwicandelo loncwadi ngo-1977, nangona yayiku-2014 xa wayehambisa inoveli yakhe yokuqala: Ilinde inkosi. Kwiminyaka emibini kamva, wabuya ehamba no: Isiqalekiso sika-Queen Eleanor, ibali eliqhubeka nebali elidlulileyo. Ukusukela ngoko ubhale ezinye iincwadi ezi-3: Nokuba intshabalalo inokuba lithemba (2017) Ukumkanikazi engenabukumkani (2018) kunye Intliziyo endihlala nayo (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Intliziyo endihlala nayo